Okwamanje, izivakashi eziningi ufuna ngendlela engabizi yokuhlala muntu phakathi nokuvakasha kwazo Petersburg. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi ngemva ukugubha trohsotletiya idolobha uqale boom yangempela embonini yamahhotela. Uma osomabhizinisi abaningi bayaqaphela ukuthi wedolobhakazi ayibalulekile amahhotela ngokwanele ekilasini umnotho, ngokushesha baqala ukuvela ehhotela mini. Manje isidingo amahhotela ukuthi anganikeza yokuhlala okunethezekayo imali encane, inkulu. Futhi kokutholakala emahhotela amancane abaningi. Manje ukuvula mini amahhotela Petersburg, Ihhotela Business-class, okukhethekile amahhotela yangasese, ezingeni lapho lidlula ngisho amahhotela 5, lokhu kwehlukahlukana esiza izivakashi edolobheni akhethe ukuhlala kahle mini-ihhotela evumelana best izidingo zabo futhi ukunambitheka. Ingaphakathi mini-amahhotela Petersburg wehlukile kakhulu, kungenzeka ukuba aphile inxuluma ezindala saseNevsky Prospekt, noma ihhotela newfangled. Inzuzo enkulu esihlanganisa zonke engabizi mini-amahhotela Petersburg - ukudala induduzo okuningi.
Uma ufuna ukuhlala, lanikeza abanye ongakhetha Ukugunda kakhulu: oda ngocingo noma nge-Internet. Ngokuyinhloko amahhotela mini Petersburg anganikeza kusukela amakamelo 10 kuya 40. Futhi ngakho, uzofika ehhotela, uzoqaphela ukuthi uphilela eduze abantu yezinto ezisemqoka efanayo futhi kunambitheka njengawe. Awukwazi ukuba ukuthi stop mini-ehhotela, isibonelo, ithimba abasubathi nemindeni nezingane. Miningi imisebenzi wehlukile kakhulu: ibhulakufesi, ukusetshenziswa kwe-sauna, Jacuzzi, ejimini ngisho nethuba ukudlala ibhuloho. Konke lokhu kusikisela ukuthi emahhotela amancane Petersburg kuthambekele izivakashi izinto ezingafani. Mini-amahhotela asezindaweni ezikahle kulo lonke idolobha. Zingase kungatholakala hhayi kuphela emaphethelweni eSt, kodwa futhi enkabeni yedolobha, eduze ezikhangayo edume kunazo zonke. Labo amahhotela ukuthi zitholakala ezindaweni ethule ofanele kakhulu abantu abafika emzini oku iNeva akuyona nokuhlola bakhe beze amasiko, futhi ukuhlangabezana zasemsebenzini. Akukho ukushiyana kwezidalwa olusemthethweni eqondile mini-amahhotela, kodwa zingahlukaniswa zibe ibhizinisi ekilasini, amakamelo ejwayelekile futhi ikilasi umnotho, intengo kuncike indawo kanye uhla ezihlinzekwa abahambi. Le mini-ihhotela zingahlelwa izinhlobo eziningana amakamelo, okuyinto kuzohluka induduzo. Njengakuwo wonke amazwe emhlabeni, izintengo yokuhlala emahhotela amancane esikhathini samaholidi ka amaholide, amaholide up 30%.
Ake sibheke ezinye amakamelo ukunikeza amahhotela mini Petersburg izivakashi zabo futhi yini umehluko phakathi kwabo.
Umnotho Class Room. Ngokuvamile kuba engabizi emahhotela amancane Petersburg, okunikeza amakamelo abantu 2 noma 4. Ehostela inikeza yokuhlala abangafika kwabangu-10, okuyinto ewusizo uma uzohamba inkampani enkulu. Amakamelo tingafundziswa imibhede embhedeni, ucingo edilini lomshado futhi TV eyodwa kuphela, futhi itholakala endaweni yokwamukela izivakashi. Mhlawumbe ikhishi wabelane siyonikwa.
Unentshisekelo ilungiselelo elinjalo. Abantu kuphela ngubani abanandaba induduzo, futhi babona kuphela kudingeka ube yindawo lapho ungakwazi ukuchitha ubusuku futhi ngakusasa ukuya cabanga ezikhangayo leli dolobha. Ukuba ekhishini ehhotela silondoloza izimali - ungakwazi ukupheka ngokwakho. Ngokuvamile, amanani emahhotela alesi sigaba ruble mayelana 300 ngamunye endaweni eyodwa.
amakamelo ekilasini ejwayelekile - kwelinye lamakamelo kuhlinzekiwe emahhotela amancane. Kungenzeka ukuze kuhlale omunye noma ezintathu abantu. Amakamelo anemisila konkhe lokudzingekile. Indlu yangasese itholakala egumbini, nge-TV ucingo. Futhi in the hotel banganikeza ibhulakufesi. Endaweni yokwamukela izivakashi ungakwazi ukufinyelela i-Inthanethi. Ngokuyinhloko lokho ababekubheka njengemininingwane non stop izivakashi abadinga induduzo ubuncane, futhi njengoba amakamelo enjalo Site ngezamabhizinisi uphumule ngokuthula ngemva kosuku olumatasa. Izindleko izikhathi eziningana kunaleyo amahhotela ekilasini umnotho - ruble umuntu ngamunye mayelana 1,800 ngosuku.
Kodwa amakamelo ibhizinisi ekilasini zihluke kakhulu izinombolo ngenhla. Anikeza mini-amahhotela ngenduduzo okusezingeni eliphezulu. Ukuhlobisa amakamelo ungahlala, wanelisa izivakashi eyinkimbinkimbi kunazo Petersburg. nempahla Beautiful, namakamelo abanzi, i-TV kanye, yebo, likwazi ukufinyelela ekilasini ucingo ne-inthanethi. Air conditioning egumbini - akuyona into engavamile walolu hlobo amakamelo. Inani ukuhlala umuntu ngamunye kusukela 3000 RUB. Izibuyekezo Petersburg emahhotela amancane zitholakala esizeni yehhotela ngalinye.
Cabangela ezinye amahhotela ethandwa.
Ngesikhathi enkabeni yedolobha kuyinto Allure mini-ehhotela. Vele okuwuhambo lwemizuzu engu-15 ukusuka SM Area Rebellion futhi saseNevsky Prospekt. Inombolo ephelele amakamelo ejwayelekile - 16. inombolo ngayinye imelwe ngesitayela zakudala futhi ithoni elikhanyayo. guestroom ngamunye izici zonke Izinsiza. Intengo kuhlanganisa ibhulakufesi. Igumbi amazinga - 400r. ngosuku. Kuyinto ehhotela isabelomali engasihileli kuphela - abasebenzi hhayi inobungane.
Kodwa-ke, ihhotela elincane, kungokwalabo esigabeni ka-business class. Esitezi kukhona lounge endaweni ukhululekile, iziko kanye nehhovisi. I amakamelo anemisila ngokuvumelana yakamuva imfashini ukulunguza. ethokomele futhi zikhululekile kakhulu. Lapha, konke lapho ukuze uzizwe ekhaya. I negative kuphela - kuba khona amakamelo 4 kuphela, kumele ukubhuka ngesikhathi esisodwa futhi bonke. Lokho, ihhotela kuhloswe umkhaya encane. Njengoba for zamanani - intengo 5300 k. ngosuku.
Mini-Ihhotela Aleksandr Haus
Igumbi ngalinye ngamunye yakhelwe. Lena ehhotela ibhizinisi ekilasini. Ingqikithi - 16 amakamelo. Igumbi ngalinye - kuyajabulisa. Lapha, konke khona nenduduzo esiphezulu. Otelnahoditsya imizuzu engu-15 kusukela m. Garden. I negative kuphela - ke intengo kakhulu ikamelo - 7000r.
Lena ehhotela umnotho. Sekukonke kukhona 156 amakamelo. Ihhotela Itholakala enkabeni yedolobha. Izindlu ezincane ku ngamunye phansi. Emincane - Esitezi. Yebo, akusiwona elula kakhulu, kodwa intengo elihambisana - 350 k.
Amahhotela e Havana: incazelo ngendawo yokubeka ethandwa kakhulu
Ihhotela Sheraton Sharjah Beach Resort Indawo abantu SPA 5 *: incazelo, izikalo, ukubuyekezwa, izithombe
Minsk Amahhotela - kudlule izwe lobuhle makhulu
Indlela ukulungiselela sushi ekhaya: izithako ze-sushi ukwahluka isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo
Metro "Myakinino" - lo nonstandard eMoscow Station
Nilov ezingwadule, Seliger. Kanjani ukuze baye khona?
Iyini iCV tripoidny ngokuhlanganyela?
Ingabe kunzima ukufika e-White House eWashington?